ရှမ်းမြောက် မုံးစီး၊အောင်သပြေ နှင့် နပက KBC စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသို့ အလှူ Hilfe für Binnenlandflüchtlinge – We Help and Care
11. November 2021 28. December 2021 / By admin
ကျွန်ုပ်တို့ WHC မှ October 14 ရက်နေ့တွင် Pankl Racing System AG Company နှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ပုံငွေပွဲမှ ရရှိသည့် အလှူငွေများအာရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းများဖြစ်သော မုံးစီး၊ အောင်သပြေ နှင့် နပက KBC စသော စခန်းများရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၂၄ စုထံသို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၁သိန်း တန်ဖိုးရှိသော ငါးခြောက် (ငါးနီတူ)၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ပဲဝါလေး၊ အသားတု၊ ငါးပိ၊ ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် နှင့် ကလေးများအတွက် မုန့်ပဲသားရေစာတို့အား ၅၊၁၁၊၂၀၂၁ ရက်တွင် ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ပံ့ပိုးကူညီပေးသော အလှူရှင်အပေါင်းကို WHC မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
အကူအညီလိုအပ်နေသူများကို ကူညီလိုသော အလှူရှင်များအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ link မှတဆင့် လှူဒါန်းပေး၍ဖြစ်စေ၊
WHC ဘဏ်အကောင့်အား တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲ၍ဖြစ်စေ ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Wir haben die Spendengelder von unserem Charity-Event mit Pankl Racing Systems AG, welches am 14.10.2021 stattfand, bereits für unser Projekt zur Hilfe von Binnenlandflüchtlingen verwendet. Im Norden des Shan States unterstützten wir bereits die Camps Mung Ji, Aung Ta Pye und Napaka KBC (ca. 130 Haushalte) mit Grundnahrungsmittel wie, getrockneten Fischen und Shrimps, Fisch Paste, Gelbe Erbsen, Soja, Chilipulver und kleinen Snacks für Kinder im Wert von 4.100.000 Kyat (~€2.000).
We Help and Care sagt 𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 zu unseren großartigen SpenderInnen die dieses und andere Projekte ermöglichen. Auch im Namen der Spendenempfänger dürfen wir uns bedanken. Bitte spenden Sie auch weiterhin, um jenen zu helfen, die nichts haben, außer ihr Leben. Alle Informationen zu den Projekten und Spendeninformationen finden Sie auf unserer Website. https://www.wehelpandcare.org/donate/
We have donated the funds earned from the fundraising event at Pankl Racing System AG on 14th of October to IDPs camps such as Mung Ji, Aung Ta Pye and Napaka KBC Camp (approx. to 130 households) located in northern part of Shan State on 5.11.2021 Dried anchovy, dried shrimp, yellow pea, soya chunk, fish paste, chili powder and snacks for children worth of 4,100,000 MMK were distributed.
#wehelpandcare #WHC #whatishappeninginmyamar